Wikipedia, njikotá édémédé nke onyobulạ
Wụ̀ ga:	nturuụzọ̀, tùwe
ịhẹ njikọ̀ta edemede òhèrè ǹkè onyeọbụ̀là nwèr'ike ị mezi.
Edemede 1,305 dị̀ nà Ìgbò | Lèe ebe edemede dàkọ̀rọ̀
Si nà edemede mbọ̀ taà
Ùde àlà nà àgwà St. Simon.
Igbo Landing (Nwutù ndi Ìgbò ǹke ha nà è dezikwa kà Ibo Landing, Ebo Landing, mà ọ̀ bụ̀ Ebos Landing) bụ ebe ị̀tà nà okwu dị nà òkòlò Dunbar nà àgwà St. Simon, ọnụmara Glynn, Giọjia nà Njikọ̀taọ̀hà. Ọ bụ̀ ebe oke nkwụrụụ̀dọ̀ ndị Ìgbò ha gbàrà ohù kwụ̀rụ̀ nà afọ̀ 1803, ǹke okwu ya bụ̀ nà ndị Ìgbò â ha gbàrà ohù nazọ̀rọ̀ okeụgbọ ohù ǹke buru ha ga àlà Njikọ̀taọ̀hà. Akụkọ â sị̀ nà ndị â lubàrà ònwe ha nà òkòlò nà ihì ịkwụụ̀dọ̀ màkà ha sị̀ kamà ha gà èresi ha kà ohù, òtù ndị Njikọ̀taọ̀hà, ǹke nọ na a bụzịrị ndi bèkeè, nà ème ndị isi ojiì ǹke si Eluàlà, ha gà à nwụtọ nà mmiri, ha sị ha g'ị jewezi ijè nà mmụọ, jefè èhère mmiri, lọàchitazi ụlọ̀ ha. Ndi Ìgbò â nụpụ̀rụ̀ isi, jụ nà ndị butere ha g'ịgbara ha ohù nke ha gị bụ̀ ọnụ rụ ọrụ nà àbọ. Ịhẹ òmùme â bàrà urù kà akụkọ pụzịrị kà mmara àtụ̀ ọma ǹke ndị ndị Eluàlà-Àlàn'àba jị̀kwà à kọta akụkọ ifo mà ị de ị̀tà ndere ǹke dị ha mkpà. (Hụ̀cha ndetù...)
Wefụtàrà ya shí https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=Ihu_m̀bụ&oldid=62206
Há rüchàrà na ihü nka na 18 Ọnwaìse 2018, mgbe 14:43